कोलसेरोलाको टावर | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | बार्सिलोना, के हेर्ने
संसारमा धेरै टावरहरू छन् जुन मूल रूपमा सञ्चार कार्यहरू पूरा गर्दछ। तपाईंले सबै भन्दा पछि यस ग्रहमा जडान गर्नुपर्नेछ! स्पेनको आफ्नै पनि छ र ती मध्ये एक प्रसिद्ध छ कोलसेरोला टावर।
यो एक छ दूरसञ्चार टावर जुन २० औं शताब्दीको अन्तमा निर्माण गरिएको थियो। दुई बर्षमा संरचना निर्माण गरियो जुन तयार हुनुपर्‍यो, र, को प्राप्तिको लागि बार्सिलोना ओलम्पिक खेल '92।
स्पष्ट रूपमा यो अझै उभिरहेको छ र तपाईं स्पष्ट रूपमा यसलाई भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं भ्रमण गर्न जानुहुन्छ भने बार्सिलोना र तपाईं शहर र यसको वरपरको दृश्यको उत्कृष्ट दृश्य हेर्न चाहानुहुन्छ, भने यो भ्रमणहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न। होशियार हुनुहोस् यदि तपाईं पैसा खर्च गर्न चाहनुहुन्न तर राम्रो दृश्य हुनुहुन्छ भने, उनीहरू भन्छन कि उत्तमहरू सस्ता हुनुका साथै तिबिडाबोको शीर्षबाट हुन्।
ओलम्पिक खेलहरू सम्पन्न हुने बारे सोच्दै, एउटा समाज सिर्जना गरियो जसको उद्देश्य टावरको निर्माण र अपरेशन दुवै थियो। यसरी जन्मिएको थियो १ 1987 XNUMX मा सोसिआदाद टोरे डि कोल्सेरोला SA, TVE, Telefónica र बार्सिलोनाको सरकारको सहभागिताको साथ।
तीन बर्ष पछि टेलिकम्युनिकेसन टावरमा काम सुरु भयो जुन यस संस्थाको उद्देश्य हुनुपर्दछ खेलको सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै चीजको जडानको पोइन्ट.
बार्सिलोनाको सरकारले यस कम्पनीलाई सियरा डि कोल्सेरोलामा रहेका जमिनहरू दिए, टुर्या ला लाविलामाDecades दशकदेखि यता टावरको व्यावसायिक शोषण गर्न अझै एक जोडी बाँकी छ, भन्नु भनेको यसको दूरसंचार प्रणाली भाँडामा लिनुहोस् र दोस्रो, पर्यटक शोषण। जे भए पनि, प्रारम्भिक प्रोजेक्टमा गाजेबोको डिजाईन आवश्यक पर्‍यो, त्यसैले सुरुदेखि नै आगन्तुकहरूका लागि दृष्टिकोणको सोचाइ थियो।
जस्तो कि यो प्रकारको कार्यहरूसँग हुने गर्दछ एक अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतियोगिता खोलिएको थियो र अर्को वर्ष, १ 1988 XNUMX, चार धेरै व्यावहारिक र फरक व्यक्तिहरू देखा पर्‍यो। परम्परागत देखि अधिक आधुनिक। विजेता परियोजना नर्मन फोस्टरको थियो, एक स्लिम डिजाइन, थोरै पर्यावरणीय प्रभाव र क्यान्टिलिभर प्लेटफर्मको साथ। त्यसपछि निर्माण कम्पनी छनौट गर्न अर्को प्रतिस्पर्धा भएको थियो, भूमिको भौगोलिक अध्ययन गरिएको थियो र १ 1990 XNUMX ० मा निर्माण सुरु भयो कि कुल लागत थियो 36 मिलियन डलर।
१ 1991 77 १ मा प्लेटफर्महरूको सेट उठाइएको थियो, XNUMX XNUMX मीटर, ट्यूब उठाएको थियो, केबल्स राखिएको थियो र टावर अन्तिम उचाइमा पुगेको थियो। क्रिसमस बत्तीहरू पनि यसमा राखिन्छ र यो पनि देखा पर्नको लागि व्यवस्थित गरिएको छ गिनीज बुक अफ रेकर्डहरू। अर्को वर्ष उनीहरूले दूरसञ्चार प्रणालीको स्थापनासँग सम्बन्धित सबै कुरामा ध्यान केन्द्रित गरे र केही प्रसारण गरियो। त्यस पछि, वर्ष बर्ष, टावर र यसको प्रणालीहरू एनालगबाट डिजिटलमा नयाँ प्रविधिहरूमा अनुकूलित भए।
हामीलाई के चासो लाग्छ, एक वर्ष पछि १ 1993 XNUMX in मा खोलिएको शानदार पर्यटक दृष्टिकोण। तर धरहरा कस्तो छ यदि हामीले यसको वर्णन गर्नु पर्ने हो? वास्तविकतामा यो एक जटिल, धरहरा, सहायक भवन र यसको वरिपरि सानो शहरीकरण छ।
आधारबाट माथि सम्म टावरको जम्मा उचाइ २ 288 मिटर छ, २266 माथि र २० उत्खनन गरियो। बदलेमा, यो छ तेह्र प्लेटफार्महरू, दृष्टिकोण दश नम्बरमा छ र छ दुई लिफ्ट २ capacity व्यक्तिको लागि क्षमता।
यो स्थान अधिवेशन र कार्यक्रमहरूको लागि नियमित रूपमा भाडामा लिइन्छ र यो प्रस्तुत दृश्य केवल अद्भुत छ। ११.115.5..70 मिटरको उचाईमा तपाईं XNUMX० किलोमिटरसम्मको दृश्यमा पुग्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा, दृश्य दृष्टिकोण समुद्र सतहबाट 560० मिटर माथि अवस्थित छ र यो निस्सन्देह बार्सिलोनामा भेट्टाउने उत्तम वेधशालाहरू मध्ये एक हो। राम्रो मौसम मा जानुहोस् र तपाईं सबै भन्दा राम्रो चित्रहरु लिनुहुनेछ।
दृश्य दृष्टिकोणमा जानका लागि तपाईले टावरमा जानुपर्दछ आउटडोर पार्किंगबाट, जुन संयोगवश 70० कारको क्षमता छ। यो meters०० मिटर छ र कसरी टावर र यसको जटिल सियरा डे कोलसेरोला प्राकृतिक पार्क भित्र छन् पैदल धेरै राम्रो छ। टावरसँग एक छ Panoramic लिफ्ट पनि, ग्लेज्ड, जुन टावरको आधार र १० औं तला बीच १ 135 मिटर दौडन्छ। यो केवल साढे दुई मिनेटको यात्रा हो।
जान्नको लागि दिन र घण्टा भ्रमण गर्दैयाद गर्नुहोस् कि दृष्टिकोण जटिलताको कारण वा कुनै घटना वा कन्भेन्सनको भाँडाको कारणले तपाईं बन्द गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् टावरको र यसको पात्रोमा तपाईंलाई सूचित गर्नुहोस्। सामान्य रूपमा खुल्ने समय १ हो० बिहान देखि १२::0। दिउँसो र अपरान्ह २::12० देखि 45 बजेसम्म वा पछिल्लो, केहि दिन यो पनि बन्द हुन्छ :4::45:5, 45::6। साँझ, :45::7। र साँझ :45::XNUMX।
के शुल्कहरू त्यहाँ छन्? ठिक छ, तपाईंसँग बिभिन्न प्रकारका टिकटहरू छन्, केहिले तपाईंलाई टावरमा पहुँच दिन्छन् र अरूले तपाईंलाई आकर्षणहरू संयोजनको संभावना दिन्छन्। व्यक्तिगत प्रविष्टि 5, 60० यूरो लाग्छ प्रति वयस्क र तीन बर्ष उमेरका बच्चाहरु भुक्तान छैन। जो4र १ years वर्ष बीच छन्, युवा टिकट अन्तर्गत 14० यूरो भुक्तान गर्छन्। ० बर्ष भन्दा माथिका वयस्कहरूले नै समान भुक्तान गर्छन्। एउटा कार्डको साथ विद्यार्थीहरू जुन उनीहरूलाई pay,3० यूरोको रूपमा मान्यता दिन्छ।
र अन्तमा, १eयूरोका लागि तपाईसँग एउटा संयुक्त टिकट छ जसमा क्यामे डेल सेल डेल टिबिडाबो + टोरे डि कोलसेरोला आकर्षणहरू सामेल छन्।। दिमागमा राख्नुहोस् कि अन्तिम लिफ्ट सवारी बन्द हुनुभन्दा १ minutes मिनेट अघि छ।
अहिले, तपाईं कसरी Torre de Collserola मा पुग्नुहुन्छ? तपाईं त्यहाँ लिएर त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ फ्युनिकुलर र त्यसपछि बस १११ यसले तपाईंलाई टिबिडाबोको खुट्टामा छोड्छ। कार द्वारा, यो Vallvidrera रोड बाट पुग्छ। यदि तपाईंसँग कार छ वा एउटा भाँडामा हुनुहुन्छ भने, तपाईं सँग केही अन्य पर्यटन गन्तव्यहरू छन् नजिकै भ्रमण गर्नका लागि जस्तै टिबिडाबो, पार्क गोयल, गौडी हाउस संग्रहालय, पेड्रल्ब्स मठ वा क्याम्प नौ, केहि किलोमिटर टाढा।
यदि तपाईं यस जानकारीमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, यो स्पेनको तपाईंको अर्को यात्राको लागि उपयोगी छ। र बार्सिलोनाको आनन्द लिनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » बार्सिलोना » कोल्सेरोलाको टावर